Izindaba - Liyini ithemba lokuphansi kweplastiki esanda kukhuphuka?
Iphansi leplastiki le-PVC ngenxa yokusebenzisa kwalo izinto i-PVC evuselelekayo engokwemvelo, ngokuhambisana nomkhuba wanamuhla wezemvelo, kungashiwo ukuthi iyimboni yokuphuma kwelanga. Uma sibheke phambili esikhathini esizayo, i-PVC floor flooring izoba nendawo ebanzi yokuthuthuka. Iphansi lepulasitiki le-PVC lizoba ncane futhi abantu abahle basebenzise indawo yokusebenza phansi phansi, umbhali olandelayo uzokhuluma kafushane ngomkhakha wepulasitiki we-PVC ngokuzayo kwenkambiso yokuthuthukiswa kwemakethe yaseChina
01 ijubane lentuthuko lasheshiswa
Izindleko zabasebenzi abasezingeni eliphansi zaseChina kanye nezimpahla eziluhlaza zibeke isisekelo esiqinile samabhizinisi asekhaya ukukhiqiza i-PVC plastic flooring. Imakethe ebanzi nokukhula okusheshayo kwesidingo kudonsela amabhizinisi amaningi ngokwengeziwe ukungena kumkhakha wepulasitiki we-PVC. Kulindeleke ukuthi eminyakeni embalwa ezayo, ukukhula kwezinga lokukhiqizwa kweplastiki nokwenziwa kweplastiki kuzodlula lokho kwanoma iyiphi enye impahla, futhi kube ngomunye weminotho yezici ezikhula ngokushesha.
Izicelo ezibanzi ezingama-02
Ngaphezu kwezindawo zomphakathi, iphansi leplastiki le-PVC likhanya ngokwemvelo, liyabuyisela emuva ilangabi, linobufakazi bomswakama, alwa ne-skid nezinye izici, likwenza kube izinto zokuhlobisa ezithandwa kakhulu ngokuzayo. Ngaphezu kokusetshenziswa kabanzi ezindaweni zomphakathi, izophinde ingene emakethe yokuhlobisa amakhaya endaweni enkulu, futhi ububanzi bayo bezicelo buzokwandiswa kakhulu.
Ukuvikeleka okungaphezulu kwezemvelo nempilo
Ngokusebenziseka okuqhubekayo nokwenza ngcono ubuchwepheshe nobuchwepheshe bokucubungula, iphansi lepulasitiki le-PVC lizoba ukuvikelwa okungaphezulu kwemvelo nempilo, ukuphepha kuzokwenziwa ngcono futhi kuthuthukiswe, ukusebenza kahle kwezinsizakusebenza kube ngaphezulu, futhi iphansi lepulasitiki le-PVC lizoba kabusha okuthandwa kakhulu kwekhwalithi ephezulu izinto zokuhlobisa.
Izidingo zobuchwepheshe bokufaka ezingama-04 ziphakeme kakhulu
Izidingo ezingenamkhawulo zokuphepha kwezinto zokuhlobisa nokuphishekela komphumela wokuhlobisa kuzoguqula kakhulu inqubo elula yokufaka yepulasitiki ekhona ye-PVC. Ukuze ubonise kangcono umphumela wokuhlobisa okumibalabala kwepulasitiki le-PVC, izinga lobuchwepheshe benkampani yokufaka kanye nabasebenzi bokufaka lizoba ngaphezulu nangaphezulu, elizothuthukisa ubuchwepheshe bokwakha phansi kwepulasitiki le-PVC livuthwe ngokwengeziwe futhi imboni ifane kakhulu.
05 ukwahlukaniswa kwabasebenzi ezimbonini kuya ngokusobala
Ngokufana nenqubo yokuthuthukiswa kwaphansi kwepulasitiki yasekhaya ye-PVC eminyakeni yamuva nje, imikhiqizo engenisiwe inentengo yokuthengisa nokufaka esezingeni elilinganiselwe futhi ehlelekile, futhi ukwahlukana kwabo kwabasebenzi kucacile. Abaphakeli bezinto zokusetshenziswa abazijwayele izinto nokusebenza, ngakho-ke bangabahleli bezokwakha abahamba phambili, futhi babe ngesinye sezici eziphawuleka kakhulu zomkhakha wepulasitiki we-PVC wasekhaya. Eminyakeni embalwa ezayo, amabhizinisi wokukhiqiza phansi wepulasitiki we-PVC azofana. Ngeke nje babe ngabaphakeli bepulasitiki le-PVC kuphela, kepha futhi nomsekeli omuhle kakhulu wokwakhiwa kwepulasitiki le-PVC.
Kuqiniswe ukuhlushwa kwezimboni okungu-06
Yize i-PVC flooring yepulasitiki ingakenziwa isikhathi eside eChina, izici zayo zesifunda zisobala kakhulu futhi imboni ayigxilile. Kwakhiwe izisekelo ezimbalwa zezimboni e-Hebei, Beijing, Jiangsu, Shanghai naseGuangzhou. Ngokunwetshwa okuqhubekayo kwesilinganiso sokukhiqizwa kwamabhizinisi emikhiqizo yasekhaya, ukuhlushwa kwezimboni kuzoqiniswa kakhulu, futhi ukubusa kuphela kuzoba namandla ngokwengeziwe, futhi kukhuthaze ukubambisana nokuhlanganiswa phakathi kwezimboni.
Phansi, PVC Sponge zaphansi, Umugqa Wekhaphethi Waphansi, I-Pet Felt Esekela Ukusekelwa, PVC Carpet, I-Pet Sponge Flooring,